Mayelana NATHI - Huizhou Vivibetter Packaging Co., Ltd.
HuiZhou VIVIBetter emaphaketheni Co., Ltd.
HuiZhou VIVIBetter emaphaketheni Co., Ltd. yasungulwa ngo-2015 ne-utshalomali 1 million yuan. Kukhona abasebenzi abangaphezu kuka-50, kufaka phakathi ochwepheshe abayi-5 efektri abanamamitha ayisikwele ayi-1000, inani lonyaka lokukhiqiza elifinyelele ku-5 miilion yuan. Singanikeza insizakalo kusuka ekwakhiweni, ekuphrinteni kuya ekucutshungweni kokuthunyelwe.
Ukuthuthuka okungcono, i-VIVIBetter izothuthukisa futhi iguqule ngokuphelele ukuqinisa ukuncintisana kwayo kanye nomthelela wayo. I-VIVIBetter iphikelela kwinqubomgomo yekhwalithi yokubamba iqhaza kwabasebenzi bonke, ukuqinisa ukusebenza nokugcina ukuzibophezela kwawo wonke amakhasimende. Sisungula i-ISO9001 Quality Assurance System kanye ne-ISO14001 Management Management System. I-VIVIBetter iwine idumela elihle kumakhasimende anokuphathwa kwezesayensi nokusebenza ngempumelelo, umkhiqizo osezingeni eliphakeme, intengo efanelekile, insizakalo yokugcina isikhathi nokusebenza kahle, kufaka phakathi insizakalo ye-OEM ne-ODM.
Imikhiqizo eyinhloko ku-VIVIBetter ifaka zonke izinhlobo zokupakisha ze-PET ne-Textile, isikhwama esingenamanzi, ubhaka ongangeni manzi, izicathulo ezingangeni manzi namagilavu ​​kakotini .mops. Amathawula nezindwangu izikhwama zokuthenga ezahlukahlukene njalonjalo. Senza imikhiqizo ngokuya nge-PDF noma i-AI kumakhasimende noma ukuyidizayina uma kunesidingo.
Imakethe yamazwe omhlaba iyinkundla yethu enkulu yempi .Ukuqina okuphelele okuvela phesheya kuhlala no-80% wenkampani yethu.Ithemba lokuthi sizonikeza izimpahla ezisezingeni eliphakeme kumakhasimende avela kuwo wonke umhlaba.
Isiqubulo sethu sithi. "Ikhasimende lingunkulunkulu wethu nekhwalithi ebekwa kuqala .Ukucabanga ngamakhasimende nganoma yisiphi isikhathi. Xazulula inkinga kuqala"